Hagaha Cox's Bazar Halal - Makhaayadaha - Masaajiddada - Hotels Friendly Hotels
Cox's Bazar waa goob dalxiis oo ku taal qaybta Chittagong ee koonfurta-bari Bangladesh. Waxay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer adduunka adduunka, 120 km (75 mayl) dheer.
Hordhaca Cox's Bazar
Panorama ah Cox's Bazar
Dadka reer Bangaladhesh kama helaan wax aad uga wanaagsan Cox's Bazar, oo ah dalxiis xeebeedka ugu caansan dalka. Nooca loo yaqaan 'Cancun of bariga', waa mid loo yaqaan 'choc-a-bloc' oo leh hudheelo waawayn oo sibidh leh iyo horumarin ballaadhan oo loogu talagalay dadka waaweyn ee waddanka. Qof ajnabi ah uma badna inuu la mid noqon doono fasaxyada kale ee xeebta ee aad qaadatay, laakiin weli waa xiiso leh in la arko sida ay reer Bangaladhesh ugu noolyihiin. Xeebta waa dad badan, gaar ahaan agagaarka Hotel Motel Zone, oo ah koox ballaaran oo hudheelo caan ah. Filo feejignaan fara badan, oo filo inaad si buuxda u labbisto.
30 km koonfur waa xeebta Inani. Waxyaabaha waa inay halkan ka aamusnaadaan, laakiin wali waxay filayaan inay xoogaa fiiro gaar ah u yeeshaan.
Qiyaastii 150 km koonfur ka xigta Chittagong, Cox's Bazar wuxuu ku xiran yahay labadaba hawada iyo wadada ka timaadda Dhaka iyo Chittagong.
Duulimaadyada aan joogsiga lahayn waxaa laga heli karaa Chittagong iyo Dhaka oo ku yaal GMG Airlines ama United Airways. Duulimaadyadu waxay u muuqdaan kuwo maalinle ah inta lagu jiro xilliga sare (Oktoobar - Apr) laakiin guud ahaan waxay dib ugu noqdaan 3-4 duulimaad usbuucii inta lagu jiro Xagaaga iyo Monsoon (Maajo - Sebtember).
Saldhigga baska ugu weyni waa dhowr kiilomitir dhanka bari ee aagga bartamaha magaalada, qiyaastii 15 daqiiqo / Tk 10 rickshaw raacid ah. Basaska maxalliga ah waxay aadaan Chittagong (Tk 120, 4 saacadood) iyo Teknaf (Tk 70, 3 saacadood).
Shirkadaha basaska ee gaarka loo leeyahay waxay xafiisyo ku leeyihiin agagaarka Hotel Sea Queen ee wadada weyn, iyo sidoo kale inay ku yaalliin aagga Hotel Motel.
Wareeg-rickshaws way badan yihiin, safarka u dhexeeya Hotel Motel Zone iyo agagaarka Lake Laldighi ee wadada weyn waa inuu ku kacaa Tk 12, in kasta oo ajaaniibtu ay si adag ugu dagaallami doonaan qiimahaas. Waxay weydiin doonaan ugu yaraan Tk 20, Tk 15 waa cadaalad ku filan oo dhexdhexaad ah.
Miilal ciid ah oo dahab ah, buuro dhaadheer, hirar haf ah, baagag midabo badan leh, macbadyo Buddhist ah iyo qabaa'il, cunno qurux badan - tani waa Cox's Bazar, caasimadda dalxiis ee Bangladesh.
Waxa lagu sameeyo Cox's Bazar
Dugsiga Sare ee Bangladesh, Xeebta Laboni, Bahar chera Street. Casharrada 'Surf cashar': 1,500 Taka maalin dhan; Kireynta guddiga: 1,000 Taka maalin dhan; Kireynta guddiga jirka: 500 Taka maalin dhan. Xirmooyinka baakada ayaa sidoo kale la bixiyaa. (cusbooneysiiyay Dec 2015)
Fest Baashaal, FunFest Himchori Beach Cox's Bazar Bangladesh. (la cusbooneysiiyay Jul 2020)
Wax ka iibsiga Cox's Bazar
Waxa ku yaal dukaanno badan hudheelka hudheelka hudheellada ee loogu talagalay dalxiisayaasha Bangladesh. Waxyaabaha laga sameeyay qolofta badda waa kuwo caan ah oo sidoo kale iibiya iibiyeyaasha xeebta, laakiin ka fikir laba jeer dhiirigelinta dhaqanka noocaas ah ee aan deegaanka ahayn.
Sidoo kale waad baari kartaa Suuqa Burmese, laakiin ha ka filan farsamo gacmeed badan. Dharka caadiga ah iyo dharka Burma ayaa runtii xiiso leh. Taas ka sokow, waxaad ka heli doontaa dukaamo iibiya dahabka luul. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa qaar ka mid ah alaabada quruxda badan ee deegaanka (alwaax sandal ku saleysan), dhar gacmeed leh iyo sariiraha iyo waxyaabo kale oo badan.
Si kastaba ha noqotee, sharad fiican ayaa noqon doonta inaad ka iibsato maqaallada xiisaha iibiyaasha mobilada kuwaas oo u badan inay kuu soo dhawaadaan intaad ku nasaneysid xeebta horteeda. Kaliya ma haystaan ​​alaab wanaagsan, laakiin qiimaha la soo bandhigo sidoo kale waa ka raqiisan yahay isla suuqyada.
Kalluunka la qalajiyey waa cunno macaan oo borotiin leh, waxaana laga iibsan karaa suuqa weyn ee Cox's Bazar. Waxa kale oo jira dukaamo yar oo u dhow aagga hudheelka, laakiin way ka wanaagsan tahay in laga iibsado suuqa weyn.
Makhaayada Jhawban iyo Makhaayada Poushee, albaabka isku xiga ee Hotel Sayeman Road oo koonfurta ka xigta Sea Beach Road, waxay u adeegaan si la mid ah cuntada Bangladesh sida kalluunka shiilan, takhasuska Cox's Bazar. Labada makhaayadoodba si waali ah ayey caan u yihiin, gaar ahaan waqtiga qadada. Poushee waxay u badan tahay mid ka mid ah maqaayadaha ugu fiican Cox's Bazar, waxayna u adeegtaa cunnooyinka badda ee macaan. Cuntooyinka Tk 60-130.
Kafeega Mermaid, Xeebta Badda Inn,Gudaha Hotel Motel), 01815 672855. Qado iyo casho ilaa 19:00. Makhaayaddan cusub ee laga fiirinayo xeebta koonfureed ee Hotel Media International, waa mid saaxiibtinimo leh oo dib u dhac leh waana laga yaabaa inay tahay meesha ugu wanaagsan ee lagu aaso aagga. Hadday meel kale joogi lahayd qiimaheedu ganacsi wuu ka saari lahaa, laakiin halkan waa tan si fiican loo qaatay. Waxay leedahay dhowr meelood oo fadhiga iyo hammo ah, iyo menu hal abuur leh oo ay ku jiraan noocyo kala duwan iyo canjeelo macaan, iyo cuntooyinka culus ee badda sida saladh haley, baastada iyo kalluunka pizza ee Tk 250-400. Casiirrada macaan ee udgoon waxay kudhowaad yihiin Tk 80 waxayna shaandheeyaan kafee iyo espresso agagaarka Tk 50. Muusigga mararka qaar shaki ayaa laga qabaa laakiin waxay u furan yihiin codsiyo.
Kafeega Dhagaxa Badda, Xeebta Badda Inn. 11am ilaa goor dambe Maaddaama ay tahay dhismaha kaliya ee labada dabaq leh ee ku yaal dhinaca hore ee xeebta, Sea Stone Café waxay bixisaa aragtiyo heer sare ah oo 180 heer sare ah oo laga helo xeebta Cox's Bazar. Dusha sare waa meesha ugu fiican magaalada ee lagu daawado qorraxdu ka dhacdo Bay Bengal. Cunnooyinka tayada leh ee Reer Galbeedka iyo Aasiyaanka ayaa la siiyaa, sidoo kale cabitaanno cusub, kafee iyo shaah Dadka soo galaya waxaa ka mid ah baras la dubay, calamari iyo salad niçoise ah. Waxay u adeegtaa baastada guriga lagu sameeyo, pizza, digaag iyo hilib lo'aad, oo ay weheliyaan cowska, calamari, carsaanyo, aargoosatada iyo kalluunka. Shaqaaluhu waa saaxiibtinimo inkasta oo adeegu gaabis noqon karo.
Alcohol waxaa laga heli karaa meelo yar oo ka mid ah Cox's Bazar. Hoteelada soo socda waxay leeyihiin baarar kuwaas oo guud ahaan furan laga bilaabo 19:00: Seagull Hotel, Hotel Sayeman, Hotel Shaibal, Hotel Renaissance. Ha filan wax badan maadaama jawigooda uu ka tago wax badan oo la jeclaan karo mana jirto wax dammaanad qaad ah in biirku qabow noqon doono. Qiimayaashu way ka sarreeyaan intaad filan karto.
Halkee laga joogaa Cox's Bazar
Inta badan hudheelada miisaaniyadda waxay ku yaalliin agagaarka harada Laldighi ee aagga magaalada weyn. Xayawaanka waaweyn ee sibidhka ayaa u dhow xeebta, wayna sii weynaanayaan wayna sii weynaanayaan markii aad u wareejiso 2 km koonfur dhanka Hotel Motel Zone.
Hotel Sea Gull iyo Hotel Media International waa xulasho hufan oo ku yaal Bartamaha magaalada. Waxaa jira dhowr hoteel/mootooyin sida Hotel Probal iyo Sikat oo ay maamusho Parjatan Corporation, oo ah hay'ad dalxiis dowladeed.
Hotel Seagull, Hotel Motel Zone. Soo galid: 1400, ka bixitaan: 1200. Seagull waxay u badan tahay hudheelka ugu fiican Cox's Bazar. Waa mid casri ah oo ammaan ah, oo leh lugo goglan oo u gaar ah xeebta. Waxay leedahay bar qarsoon - laga bilaabo aagga soo dhaweynta, u soco dhanka maqaayada weyn una leexo midig, ka dibna u sii mara qeyb ka mid ah jikada iyo jaranjarada. Barkad dabaal wanaagsan Tk3000.
Hotel Crown Sea, Marin Drive, Kola Toil New Beach. Sea Crown waa hudheel seddex xiddig leh oo deluxe ah oo ku yaal Xeebta
Dalxiis Xeebeedka Mermaid, Pechar Dwip. Qolalka-hawo-qaboojiyaha ah oo ku yaal meel xeebta ka baxsan oo leh aragtiyo aad u wanaagsan. Waxay leedahay makhaayad u adeegta cuntada badda cusub. Wi-Fi lagu kalsoon yahay Tk 11,000-25,000 habeenkii. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Haddii aad u baahan tahay lacag caddaan ah, waa fikrad fiican inaad hesho kahor intaadan aadin baar ama naadi. American Express, Master Card, VISA Card waxay aqbaleen ku dhowaad dhammaan qolka ATM-ka ee ku yaal magaalada xeebta. Horey u hubi si aad u aragto haddii bangigaagu leeyahay goobo ku yaal Cox's Bazar. Marinka, ATM-yada soo socda ayaa khamaaris aamin ah:
Waayo,Bangiga Heerka Sare macaamiisha, waxaa jira ATM-yada gudaha Ocean Paradise Hotel & Resort oo ku yaal Wadada Kolatoli, Hotel Motel Zone.
Isbitaalka guud ee Cox's Bazar, Cox's Bazar Sadar. 24/7. Isbitaalada Dadweynaha ee Cox's Bazar Sadar. (la cusbooneysiiyay Apr 2018)
Isbitaalka Magaalada & Cilad-baarista, Cox's Bazar. 24h. Isbitaalka ku yaal Cox's Bazar (la cusbooneysiiyay Apr 2018)
Jasiiradda Saint Martins - Jasiiraddan yar ee xeebaysan oo qiyaastii 10 km (6 mi) koonfur-galbeed ka xigta cirifka koonfureed ee berriga waa hadal-kuleyl kuleyl leh, oo leh xeebo ay ku xardhan yihiin timireed qumbaha iyo nolosha badaha badan leh. Ma jiraan wax ka culus oo halkan lagu sameeyo oo aan ka ahayn nuugista falaadhaha, laakiin waa meel nadiif ah oo nabdoon iyada oo aan xitaa kaneecadu carqaladeyn degganaantaada.
Teknaf: Cirifka koonfureed ee Bangladesh, Teknaf waxay ku taal daafaha wabiga Naaaf iyo dhammaadka gobollada buuraleyda ee degmada. Myanmar waxay ku taal webiga ka soo horjeedkiisa. Xayawaanka duurjoogta ah iyo shimbiraha waa la daawan karaa, laakiin waxa ugu xiisaha badan waa safarka webiga. Xeebta ballaaran ee bacaadka ah ee ku taal dusha sare ee buuro dhaadheer oo leh keymo cagaaran waa muuqaal soo jiidasho leh oo aan waligeed la iloobi doonin.
Himchari: Waxay qiyaastii 32 km koonfur ka xigtaa Cox's Bazar oo ku teedsan xeebta, meel fiican oo loogu talagalay dalxiis iyo sawir qaadis. Buurta caanka ah ee “Broken Hills” iyo biyo-dhacyada halkan ku yaal waa aragtiyo dhif ah. Waa saacad u jirta Cox's Bazar waana meel ku habboon dhaqashada badda iyo dalxiis.
Maheskhali: Jasiirad ku taal xeebta Cox's Bazar. Waxay leedahay baaxad dhan 268 kilomitir oo isku wareeg ah. Iyada oo loo marayo Xarunta jasiiradda iyo dhinaca xeebta bari ayaa kor u kacda buuro hoose, oo dhererkoodu yahay 90 mitir; laakiin xeebta galbeed iyo woqooyi waa daaweyn hoose, oo ay ka xayuubtay hawdka mangrove. Buuraha ku yaal xeebta waxaa laga dhisay macbudka Adinath, oo loogu talagalay Shiva. Dhinaceeda isla buurta waxaa ku yaal Pagoda Buddhist.
Raamu: Tani waa tuulo Buddhist caadi ah, oo qiyaastii 16 km u jirta Cox's Bazar, wadada weyn ee aada Chittagong. Waxaa jira monasteries, khyangs iyo pagodas oo ay ku jiraan sawirro Buddha ah oo dahab ah, naxaas ah iyo biro kale oo lagu dhajiyay dhagaxyo qaali ah. Tuuladu waxay leedahay soojiidasho u gaar ah. Xirfadlayaashu waxay ku mashquulsan yihiin ganacsigooda aqoon isweydaarsiyo furan iyo farsamayaqaannaduba waxay ku sameeyaan sigaar gacmeed ay ku samaystaan ​​barxadooda sida guryaha.
Jasiiradda Sonadia: Waxay qiyaastii 7 km u jirtaa Cox's Bazar iyo qiyaastii sagaal kiiloomitir oo laba jibbaaran aagga. Dhinaca galbeed ee jasiiraddu waa ciid iyo noocyo kala duwan oo madfac ah ayaa laga helaa xeebta. Qeybta woqooyi ee jasiiradda waxaa ku yaal sariirood aaladda daaqadda daaqadda. Xilliga jiilaalka kalluumeysatada wuxuu xeryo kumeelgaar ah ka sameystay jasiiradda oo uu qalajiyo kalluunka badda ku jira.
Xeebta Inani: Waxay qiyaastii 32 km koonfur ka xigtaa Cox's Bazar oo xeebta uun bay ku taal, oo baddu xagga galbeed ka xigto oo ay ka xigto buuro dhaadheer oo xagga bari ah. Inani wuxuu sixir sixir ah ugu ridayaa kuwa u soo talaabaya dhulkaas riyada ah. Waa kalabar uun
gudaha Cox's Bazar
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaasha ee Bangladesh > Tilmaamaha 'Cox's Bazar Halal Guide'